आज प्रेमचन्द जयन्तीः जीवनी र जीवनकथा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsआज प्रेमचन्द जयन्तीः जीवनी र जीवनकथा
July 31, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, शब्द 0
हिसाबमा कमजोर प्रेमचन्दको जीवन हिसाब
मृत्युको दशकौँपछि पनि आफ्ना कठिन साधनाबाट जन्मिएका महान् कृतिहरूका कारण सधैँ जीवित रहन्छन्– प्रेमचन्द। विशेषत: उपन्यास लेखन र शिल्पमा उनी कहिल्यै बिर्सिइँदैनन्। झन्डै दर्जन उपन्यासबाट भारतीय साहित्यलाई उनले छुट्टै उचाइ दिए। त्यसैले उनलाई भनिन्छ– ‘भारतीय उपन्यास सम्राट’। उनको वास्तविक नाम धनपत राय हो । तर, ‘प्रेमचन्द्र’ नामले उनी स्थापित मात्रै होइन, विश्वविख्यात बने ।
३१ जुलाई १८८० मा भारतको वाराणसीदेखि चारमाइल टाढाको लमही गाउँको पाण्डेपुरको एक निर्धन परिवारमा बुबा अजायवलाल र आमा आनन्दीदेवीको सन्तानका रूपमा जन्मेका प्रेमचन्दको परिवार ठूलो थियो, सम्पत्तिको नाउँमा ६ बिघा जमिन । उनको परिवार बाबुको हुलाकको खरिदारको जागिरले जेनतेन चलेको थियो । प्रेमचन्दले गाउँको स्कुलबाटै प्रारम्भिक शिक्षा आर्जन गरेका थिए । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले बाल्यकालमा बडो दु:खी थियो । राम्रो लाउनु र मीठो खानु कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । स्कुलमा पनि उनी कमजोर विद्यार्थी थिए, गणितमा त झनै कमजोर । स्कुलमा उनी गणितको कक्षा बंक गर्थे । सानोमा बरालिएर बिग्रनुसम्म बिग्रेका थिए । एकदमै चकचके स्वभाव थियो । पढ्नमा होइन, खेल्नमा जोड दिन्थे । त्यही उमेरमा उनले साथीभाइको खराब संगतबाट चुरोट, बिँडी खान सिके । नराम्रोसँग बिग्रिए । आवारा, लफंगा बने ।
जुनबेला उनी खराब साथीभाइका संगतले जीवनको नराम्रो मार्गमा थिए, त्यही बेला एकजना किताब पसलेसँग उनको चिनजान भयो । त्यही सामान्य चिनजानले उनको जिन्दगीको लय नै बदलिदियो । भएको के थियो भने प्रेमचन्दका बाबुको हुलाकी जागिरेको क्रममा गोरखपुरमा सरुवा भयो । त्यतिखेर उनी १३औँ वसन्तमा हिँड्दै थिए । त्यहीको एक किताब पसलेसँग उनको जानपहिचान भएको थियो । फुर्सदको समय उनी त्यही बुद्धिलालको किताब पसलमा पुग्थे । त्यहाँ जाँदाजाँदै उपन्यास पढ्ने बानी बस्यो । सुरुमा उनलाई उर्दुमा लेखिएको उपन्यासले ध्यान तान्यो । पछि हिन्दीमा लेखिएका कैयौँ उपन्यास, काल्पनिक, जादुगरी तिलस्मी कथाहरू पढ्न थाले । उनमा एकप्रकारको पढ्ने लत नै बस्यो । उनले लेख्न सुरु गरे । सन् १८९७ अर्थात् १७ वर्षको उमेरदेखि निरन्तर लेख्न थाले । बीएसम्म अध्ययन गरेका प्रेमचन्द्रले सुरुमा उर्दु, फारसी र अंग्रेजी भाषा अध्ययन गरे ।
बनारसको क्विन्स कलेजमा पढिरहँदा उनको पन्ध्र वर्षको कलिलै उमेरमा एकजना राम्री युवतीसँग बिहे भयो । युवती राम्री भए पनि शीलस्वभाव, बानी व्यहोरा खराब थियो । प्राय: प्रेमचन्दसँग झगडा गरिरहन्थिन् । यसैकारण उनको वैवाहिक जीवन सफल हुन सकेन । बिहे गरेको दुई वर्षपछि आमा गुमाएका प्रेमचन्दले केही समयपछि बाबु पनि गुमाए । वैवाहिक जीवन असफल हुनु, बाबुआमाले सदाका लागि छोडेर जानुले उनी टुहुरो भए । जीवन–हिसाब बडो कष्टपूर्ण गतिमा हिँड्यो । पढाइ जारी राख्न धौधौ भयो । बाँच्नका लागि ट्युसन पढाउन थाले । जिन्दगी त अझै पनि कष्टपूर्ण नै थियो । खर्चले कहिल्यै पुगेन । हुँदाहुँदा बाँच्नका लागि आफ्ना महँगा पुस्तकहरू बेच्नुपर्ने स्थिति पनि आयो । त्यसमाथि ऋण लाग्यो । जस्तोसुकै कठोर स्थितिमा पनि साहित्य अध्ययन र लेखन छोडेनन् ।
प्रेमचन्द गान्धीजीको असहयोग आन्दोलनबाट निकै प्रभावित थिए । उनी रूढीवादी र कट्टरवादीको कडा शब्दमा विरोध गर्थे र मौलिक सुधारको वकालत गर्थे । उनले अंग्रेज साम्राज्यवादविरुद्ध जनमत तयार गर्ने काम सुरु गरे ।
पहिलो विवाह असफल भएपछि उनले दोस्रो विवाह शिवरानी नामक विधवा महिलासँग गरे । त्यतिखेर विधवालाई पत्नी स्विकार्नु ठूलो साहसिक कदम थियो, एउटा सामाजिक विद्रोह । उनीहरूको वैवाहिक जीवन सुमुधुर भयो । शिवरानीले प्रेमचन्दलाई प्रत्येक सुखदु:खमा साथ दिइन् । प्रेमचन्दले आफ्नी पत्नी शिवरानीलाई कति माया गर्थे भने उनले लेखेको यो पत्र साक्षी छ :
म तिमीलाई छोडेर काशी आएँ तर यहाँ तिमीविना शून्य लागिरहेको छ । के भनूँ ? तिम्री बहिनीको कुरा कसरी नमान्नु ? नमान्दा तिमीलाई नराम्रो पनि लाग्ने थियो । जतिबेला तिमीलाई उनीहरूले रोके, तब म तनाबयुक्त बनेँ । तिमी त आफ्नी बहिनीसँग बसेर त्यहाँ खुसी छौ होला तर म यहाँ चिन्तित छु, जस्तो एउटा गुँडमा दुइटा पक्षी बसेका हुन् र तीमध्ये एउटा नहुँदा दोस्रो चिन्तित भएको छ । तिम्रो यही न्याय हो, तिमी त्यहाँ मोज गर म तिम्रो नामको माला जप्नेछु । तिमी मसँग भएको भए म भरसक कतै जाने नाम लिने थिइनँ । तिमी आउने नामै लिँदिनौ । मलाई १५ तारिखमा प्रयोग प्रयाग युनिभर्सिटीमा बोलाइएको छ । यसैकारणले म अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन नत्र अहिलेसम्म म एक्लै बस्ने नै थिइनँ, पहिल्यै आइसक्ने थिएँ । यसैले म पर्खेर बसेको छु । अब तिमी १५ गते आउनका लागि तयार भएर बस्नू । साँच्चै भनिरहेको छु, घरले मलाई खाइरहेको छ । कहिलेकाहीँ यो सोच्ने गर्छु, यो सबैले यसरी नै चिन्ता गर्ने गर्छन् या मैल मात्र हो ? तिमी भएको ठाउँसम्म रुपियाँ पुगिसक्यो होला । तिम्री बहिनीलाई मेरो नमस्ते सुनाइदिनू । बच्चालाई माया । कतै यो पत्रसँग म आइपुग्न पनि सक्छु । जवाफ छिट्टै लेख्नू ।
जिन्दगीभर साहित्य सिर्जनामा समर्पित प्रेमचन्दको पहिलो उपन्यास मन्दिरको रहस्य (आसरारे अवीद्) थियो । त्यो उपन्यास सन् १९०३ मा उर्दु साप्ताहिक पत्रिका ‘आवाजे खल्के’ मा धारावाहिक रूपमा प्रकाशित भएको थियो । यसैगरी, उनको दोस्रो उपन्यास ‘प्रेम’ हिन्दी साहित्यमा प्रकाशित भएको थियो । सन् १९०५ मा राजनीतितिर आकर्षित भएर ‘जमाना’ नामक पत्रिकामा राजनीतिक लेखहरू लेख्न थालेका थिए । साहित्यमा आफ्नो लेखन निखार्दै उनले ‘सेवासदन’ नामक उपन्यास निकाले । त्यो उपन्यासले भारतमा हल्लीखल्ली नै मच्चायो । सन् १९२४ मा उनले ‘रंगभूमि’ जस्तो चर्चित उपन्यास लेखेर श्रमिकको आवाजलाई बुलन्द पारे । यस उपन्यासले उनलाई चर्चाको शिखरमै पुर्‍यायो । उनलाई भारतमा ‘उपन्यास सम्राट’को पदवीले विभूषित गरियो ।
उनले सन् १९३१ मा गवन, सन् १९३२ मा कर्मभूमि र सन् १९३६ मा बहुचर्चित उपन्यास गोदान प्रकाशित गरेका थिए । उनको मंगलसूत्र उपन्यास अधुरै रह्यो । त्यसैले गोदान नै उनको अन्तिम र बहुचर्चित उपन्यास हुन पुग्यो । यसो त गोदानभन्दा अघि सेवासदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, कायाकल्प र प्रेमाश्रमजस्ता चर्चित उपन्यास पनि लेखेका थिए । प्रेमचन्दले नाटक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सशक्त कलम चलाएका छन् । उनका प्रख्यात नाटकहरूमा प्रेमको कैदी, कविता, संग्राम र मजदुर हुन् । झन्डै तीन सयजति कथा लेखेका प्रेमचन्दका उल्लेख्य कथाहरूमा नवनिधि, द्वादशी, प्रेमपूर्णिमा, पञ्चप्रसून, सप्तसुमन, प्रेमपच्चिसी, सप्तसरोवर, प्रेम आदि पर्दछन् । उनले चेखब, टल्सटाय, डिकेन्स, गोर्कीका कृतिको अनुवाद पनि गरेका थिए ।
मुन्सी प्रेमचन्दका अधिकांश उपन्यासमा किसान र जमिन्दारबीचको युद्ध, श्रमिक र मालिकबीचको लडाइँ, छुवाछूतको विरोध तथा मानवताको मूल्यका कथा छन् । उनलाई विश्वचर्चित बनाउने उपन्यास भने ‘गोदान’ नै हो । उनले यस उपन्यासमा ‘मेहता’ पात्रमार्फत आदर्श वाक्य बोलका छन्, ‘मसँग यस्ताहरूप्रति कुनै सहानुभूति छैन, जो कम्युनिस्टहरू भैँm कुरा गर्छन् र राजकुमारहरूभैँm जीवन व्यतीत गर्छन् ।’
स्वतन्त्रता र न्यायका पक्षपाती प्रेमचन्द आफ्नो जिन्दगीको उत्तरार्धमा विभिन्न रोगले ग्रस्त भएर थलिए । उनलाई सन् १९३२ देखि ग्यास्ट्रिक, अल्सर र ड्रप्सीजस्ता रोगले समातेर ओछ्यानमा परे । ५६ वर्षमा ८ अक्टोबर १९३६ मा यस धर्तीबाट उनी बिदा भए ।
मेरो जीवन सपाट, समतल मैदानजस्तै छ । यसमा कहीँकहीँ सामान्य खाल्टाखुल्टी त छन् तर घना जंगल, पर्वत, खण्डहरलगायतको कुनै स्थान छैन । जो मान्छे पहाड घुम्ने रहर गर्छ तिनीहरू त मलाई देखेर निराश हुन्छन् । मेरो जन्म सन् १८८० मा बनारस सहरबाट ४ मिल टाढा लमही गाउँमा भयो । पिता हुलाकमा सामान्य ‘क्लर्क’ थिए । आमा दीर्घरोगी, एउटी दिदी पनि थिइन् । त्यसबेला पिताजीको मासिक आम्दानी २० रुपैयाँ थियो । तलब ४० रुपैयाँ पुग्दानपुग्दै उनको निधन भयो । त्यसो त उनी साह्रै विचारशील, जीवनपथमा आँखा हेरेर हिँड्नेखालका व्यक्ति थिए । तर, अन्तिम दिनतिर एउटा नराम्रो चोट खाए । उक्त चोटबाट आफू त लडे नै साथमा मलाई पनि लडाइदिए । जम्मा १५ वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गरिदिए । विहा गरेको वर्ष दिन पनि नपुग्दै आफू भने कहिल्यै नफर्किने गरी गए ।
त्यसबेला म नौ कक्षामा पढ्थेँ । घरमा पत्नीका साथै हामी पाँच जना थियौँ, आम्दानी फुटेको कौडी थिएन । घरमा अलिअलि भएको पैसा पनि पिताजी छ महिना विरामी हुँदा र निधनपछि क्रियाकर्ममा खर्च भइसकेको थियो । मेरो सपना थियो एमए पास गर्ने र वकिल बन्ने । त्यस समय पनि जागिर अहिले जस्तै दुष्प्राप्य नै थियो । मेरो खुट्टामा फलाममात्र होइन अष्टधातु बाँधिएको थियो, तर म चढ्न चाहन्थेँ अग्लो पहाड !
खुट्टामा जुत्ता थिएन, शरीरमा सद्दे कपडा थिएन । स्कुल साढे तीन बजे छुट्टी हुन्थ्यो । म काँसीको क्विन्स कलेजमा पढ्थेँ । हेडमास्टरले मासिक शुल्क मिनाहा गरिदिएका थिए । परीक्षा आँगनमै आइसकेको थियो । र, म एक जना केटोलाई पढाउन जान्थेँ । जाडोको दिन थियो । चार बजे पुग्थेँ, ६ बजे निस्कन्थेँ । त्यहाँबाट मेरो घर पाँच मिल टाढा थियो । जति तेज हिँडे पनि घर पुग्दा ८ बजिहाल्थ्यो । भोलिपल्ट बिहान पुनः ८ बजे घरबाट हिँड्नु परिहाल्थ्यो । राति खाना खाएर टुकीमा पढ्थेँ, कुनबेला निद्रा आउँथ्यो पत्तै पाउँदैनथेँ । तर पनि मैले हिम्मत हारेको थिइनँ ।
म्याट्रिकुलेस त जसोतसो पास गरेँ, दोस्रो श्रेणीमा । क्विन्स कलेजमा पढ्ने आशा मरिसकेको थियो । मासिक शुल्क मिनाहा हुन राम्रो नम्बर ल्याउनुपथ्र्यो । संयोग, त्यही वर्ष हिन्दु कलेज खुल्यो, त्यही नयाँ कलेजमा पढ्ने सोच बनाएँ । त्यहाँका प्रिन्सिपल थिए– मिस्टर रिचर्डसन । म उनको घर गएँ । उनी कुर्ता र धोतीमा थिए, पूरै हिन्दु पहिरन । मेरो आधा प्रार्थना सुनेर उनले भने– म कलेजको कुरा घरमा सुन्दिनँ, कलेजमै आऊ । म कलेजमै गएँ, तर मेरो शुल्क मिनाहा भएन । कुनै विशिष्ट व्यक्तिको सिफारिस लैजान सक्दामात्र मिनाहा हुने देखियो । म एउटा गाउँले युवक, कसरी विशिष्ट व्यक्ति चिन्नु र सिफारिस पाउनु !
केही दिनको मेहनतपछि मलाई एउटा सिफारिस मिल्यो । ठाकुर इन्द्रनारायण सिंह हिन्दु कलेजको प्रबन्धकारिणी सभामा थिए । म उनीछेउ गएर रोएँ । सायद उनलाई मप्रति दया लाग्यो, सिफारिस दिए । खुसी हुँदै म घर फर्कें । अर्को दिन उक्त सिफारिस प्रिन्सिपललाई बुझाउने इच्छा थियो । तर, घर पुग्दानपुग्दै मलाई बेस्सरी ज्वरो आयो । दुई सातासम्म त हलचल नै गर्न सकिनँ । विभिन्न जडिबुटी खाएर एक महिनामा निको भएर उनै प्रिन्सिपल रिचर्डसनलाई सिफरिसपत्र बुझाउन गएँ ।
रिचर्डसनले ठूलो आँखा पार्दै मलाई सोधे– यतिका दिन कहाँ थियौ ?
बिरामी भएँ सर ।
कस्तो बिरामी ? उनले पुनः सोधे ।
म यो प्रश्नको उत्तर दिन तयार थिइनँ । ज्वरो आयो भनुँ भने मैले झुटो बोलेको ठहरिन सक्छ । मलाई ज्वरो भनेको सामान्य बिरामी लाग्थ्यो, जुन ठीक हुन यति लामो समय लाग्दैनथ्यो । अब के भन्ने ! मलाई अन्य रोगको नामै याद भएन । सिफारिस लिन जाँदा ठाकुर इन्द्रनारायणले मुटुकको धड्कनको रोगबारे चर्चा गरेको सुनेको थिएँ, मैले पनि त्यही रोग लाग्यो भन्दिएँ ।
प्रिन्सिपल मतिर हेर्न थाले । अब त तिम्लाई ठीक छ नि ? उनले मसँग सोधे ।
ठीक छु सर ।
ल जाऊ प्रवेशपत्र भरेर ल्याऊ ।
उनले मेरो योग्यता परीक्षा लिन आदेश दिए ।
मेरा निम्ति फेरि नयाँ समस्या जन्म्यो । मलाई अंग्रेजीबाहेक कुनै पनि विषयमा पास हुने आशा थिएन । बीजगणित र ज्यामिति भनेपछि मेरो शरीरको रौँ पनि काँप्थे । म भाग्यमाथि विश्वास गर्दै कक्षामा गएँ । बंगाली प्राध्यापक कक्षामा अंग्रेजी पढाइरहेका थिए, वासिङ्टन इर्विनको ‘रिपभान विंकिल’बारे बोलिरहेका थिए । मैले आफ्नो फर्म उनलाई देखाएँ र पछिल्लो सिटमा गएर बसेँ । एकदमै कुशल शिक्षक उनले उक्त पाठबारे मलाई थुप्रै प्रश्न सोधे । मेरो फर्ममा उनले ‘सन्तोषजनक’ भनी लेखिदिए ।
अर्को पिरियड बीजगणितको थियो । त्यसका शिक्षक पनि बंगाली नै थियो । मैले आफ्नो फर्म देखाएँ । नयाँ कलेज भएका कारण कक्षामा अयोग्य विद्यार्थीको भीड नै थियो । प्राध्यापकले मेरो परीक्षा लिए, म फेल भएँ । ‘असन्तोषजनक’ लेखिदिए । म उक्त फर्म लिएर प्रिन्सिपलकहाँ जान सकिनँ, सीधै घर फर्कें । गणित भन्नु मेरा लागि गौरीशंकर हिमालको चुचुरो नै थियो । इन्टरमिडियटमा दुई पटक गणितमा फेल भएपछि मैले परीक्षा दिन छाडेँ । दस–एघार सालपछि मैले अर्कै विषय लिएर सजिलोसँग पास गरेँ । त्यस समयमा यस्तै अनिच्छित विषय पढ्नुपर्दा कैयाँै विद्यार्थीले पढ्न छाडे होलान् !
मलाई भने जसरी पनि अगाडि पढ्ने इच्छा भइरहन्थ्यो । घर बसेर के गर्नु ? बरु गणित विषयमा मेहनत नै गरुँ, पुनः कलेज भर्ना होऊँ भन्ने लाग्थ्यो । यसका निम्ति सहर पस्नु आवश्यक थियो । संयोगबस एक जना वकिलका पुत्रलाई पढाउने मौका मिल्यो, तलब पाँच रुपैयाँ तोकियो । दुई रुपौँया आफूलाई र बाँकी घरमा दिने निश्चय गरेँ । सहरमा उनै वकिल बस्ने ठाउँमा सानो कच्ची कोठा थियो, म त्यहीँ बस्न थालेँ । म दैनिक काम सकेर गणित पढ्नका लागि लाइब्रेरी जान्थेँ । गणितमा ध्यान जाँदैनथ्यो, उपन्यासलगायतका साहित्य पढ्थेँ ।
वकिलको सालो मसँगै म्याट्रिकुलेसनमा पढ्थ्यो । तिनैले मलाई पढाउने अवसर जुटाइदिएका थिए । उनीसँग मित्रता भयो, पैसा आवश्यक पर्दा तिनैसँग सापटी माग्थेँ । जुन दिन पसलमा उधारो लिन संकोच लाग्थ्यो, त्यस दिन म भोकै हुन्थेँ । चार–पाँच महिना यसैगरी बित्यो । एक जना पसलेसँग दुईअढाइ रुपैयाँको कपडा उधारो लिएको थिएँ । दुई–तीन महिनासम्म पनि उसको पैसा तिर्न नसक्दा म पसलको बाटो हिँड्नै छाडेँ । त्यो पैसा तिर्न मलाई तीन वर्ष लाग्यो ।
जाडोका दिन थियो, साथमा एक पैसा थिएन । पसलेले उधारो दिन बन्द गरिदिएको थियो । साँझको बत्ती बलिसकेको थियो । म एउटा पुस्तक पसलमा किताब बेच्न गएको थिएँ । चक्रवर्ती गणितको कुञ्जी थियो मसँग, दुई वर्षअघि किनेको । म निराश हुँदै उक्त पुस्तक बेच्ने निर्णयमा पुगेको थिएँ । म एक रुपैयाँमा किताब बेचेर फर्कंदै थिएँ । अचानक एक जना लामो जुँगा भएको मान्छेले मलाई भन्यो– तिमी कहाँ पढ्छौ ?
मैले भनेँ– पढ्न त हाल कहीँ पनि पढ्दिनँ, तर कतै पढूँ भन्नेचाहिँ लाग्छ ।
‘म्याट्रिकुलेसन पास ग¥या छौँ ?’
‘कतै जागिर खाने त इच्छा छैन होला !’
‘कहाँ पाइन्छ र जागिर ?’
यी मान्छे एक हाइस्कुलका हेडमास्टर रहेछन् । उनलाई एक जना सहकारी अध्यापक चाहिएको रहेछ । १८ रुपैयाँ तलब रहेछ । मैले स्वीकारेँ त्यो जागिर । उक्त पैसा त्यस समय मेरा निम्ति भरपूर थियो, मेरो कल्पनाभन्दा अधिक । १८९९ को कुरा थियो यो । जुन दिन मैले १८ रुपैयाँ तलब पाउने जागिर पाएँ, त्यस दिन मेरो खुट्टा जमिनमा थिएन । यस्तो लाग्थ्यो, गणित कमजोर नहुँदो हो त म अवश्य अघि बढ्थेँ, तर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको मनोविज्ञान कहाँ बुझ्ने काम हुन्थ्यो र !
मैले सुरुका दिनमा गल्प लेख्न थालेँ । रविन्द्रनाथ टैगोरको गल्प अंग्रेजीमा थुप्रै पढेको थिएँ र तिनको उर्दु अनुवाद गरेर पत्रपत्रिकामा छपाएको पनि थिएँ । उपन्यास पनि मैले १९०१ मा लेख्न सुरु गरेको हुँ । एउटा उपन्यास १९०२ मा निक्ल्यो, दोस्रोचाहिँ १९०४ मा । मेरो पहिलो कथाको शीर्षक थियो– ‘संसारका सबसे अनमोल रत्न’ । त्यो कथा १९०७ मा ‘जमाना’ पत्रिकामा छापियो । पाँच वटा कथा राखेर संग्रह निकालेँ १९०९ मा ‘सोजे वतन’ शीर्षकमा । पाँचैवटा कथा देशप्रेममा केन्द्रित थिए । त्यसबेला ‘बंग–भंग’ आन्दोलन चलिरहेको थियो । कांग्रेस पार्टी स्थापना भएर बलियो बन्न थालिसकेको थियो ।
त्यसबेला म हमिरपुर जिल्लास्थित शिक्षा विभागमा डिप्टी इन्सपेक्टर थिएँ । कथासंग्रह निस्केको ६ महिना भइसकेको थियो । एक दिन राति जिल्लाधीशले मलाई बोलाए । ३०–४० मिल पर रहेको उनी भएको ठाउँमा पुगेँ । उनले आफ्नो अघिल्तिर मेरो कथासंग्रह राखेका थिए । म त्यो देखेर झसंग भएँ । त्यसबेला म आफ्नो वास्तविक नाममा नलेखेर ‘नवावराय’ नामबाट लेख्थेँ । मैले थाहा पाइसकेको थिएँ, गुप्तचर प्रहरी यो पुस्तक लेखकको खोजी गरिरहेका थिए । मलाई लाग्यो, जिल्लाधीशले यो कुरा थाहा पाए अनि यसबारे सोध्न मलाई बोलाए ।
‘यो पुस्तक तिम्ले लेख्या हो ?’
मैले स्वीकार गरेँ ।
उनले मसँग पाँचैवटा कथाको आशय सोधे । र, मुख बिगार्दै भने– तिमी अंग्रेजको जागिर खाएर आफ्नो भाग्य चम्काइरहेका छौ । तर पनि यस्तो कथा लेख्छौ ! मुगलकालमा भएको भए तिम्रो दुइटै हात काटिन्थ्यो । तिम्रा कथाहरू एकांगी छन् । अंग्रेज सरकारलाई गालि गरेका छौ।
उनका कुरा सुनेर मलाई यस्तो लाग्यो– संग्रहका सबै प्रति सरकारको जिम्मा लगाइदिऊँ र जिल्लाधीशको अनुमतिबिना केही पनि नलेखूँ । हजार प्रति निस्केको उक्त पुस्तक जम्माजम्मी तीन सय बिकेको थियो, मैले बाँकी प्रति जिल्लाधीशलाई बुझाइदिएँ ।
संकट टरेको महसुस भयो मलाई केहीछिन त । तर, सरकारी अधिकारीहरू यत्तिमै सन्तुष्ट भएका थिएनन् । मैले लेखेका गल्पहरूको अर्थ खोज्न थालियो । पुलिसहरू मलाई खतरनाक मान्छे देख्न थाले । डिप्टी इन्सपेक्टर भने मलाई खुब स्नेह गर्थे । उनले मेरो कलममात्र उग्र रहेको, तर विचारधारा त्यस्तो नरहेको बताइदिए । उनको कुरा नचाहेरै पनि सबैले स्वीकार गरे ।
म हमिरपुरमै थिएँ । पेटमा गडबडी हुन थाल्यो । गर्मीको महिना खानपानमा अलिकति तलमाथि भयो कि पेट दुख्न थाल्थ्यो । मलाई लाग्थ्यो बुन्देलखण्डको हावापानी नै यस्तो, जसले मेरो दुर्बल पाचनशक्तिलाई झनै कमजोर पारिदियो । तातोपानी भरिएको बोतलले पेट सेकेँ, विभिन्न घरेलु उपचार पनि गरेँ तर ठीक भएन ।
खानपानमा ध्यान दिन थालेँ । तर पनि पेटमा गडबडी भई नै रहन्थ्यो । थुप्रै पटक कानपुर पुगेर औषधिउपचार पनि गराएँ । डाक्टरी र आयुर्वेदिक दुवैखाले उपचारले पनि ठीक भएन । मलाई लाग्यो, अब जागिरको अफिस सार्नुपर्छ । म रोहेलखण्डस्थित नेपालको तराईसँग नजिक रहेको गयाको वस्ती जिल्लामा पुगेँ । सौभाग्यबस त्यहाँ मेरो परिचय पण्डित मन्नन द्विवेदीसँग भयो । उनीसँग साहित्यिक चर्चा हुन थाल्यो । त्यहाँ पनि मेरो पेटको रोग घटेन । लखनउ गएर उपचार गराएँ, तर पनि ठीक भएन । त्यसपछि मैले जागिर छाडेँ र वस्तीको एउटा हाइस्कुलमा पढाउन थालेँ । त्यहाँबाट पनि सरुवा भएर गोरखपुर पुगेँ ।
मैले वस्ती जिल्लामै रहँदा ‘सरस्वती’ पत्रिकामा थुप्रै गल्प छपाएको थिएँ । गोरखपुरका साहित्यकर्मीहरूको प्रेरणामा ‘सेवा सदन’ नामक उपन्यास लेखेँ । यो उपन्यासको सफलताले मलाई ‘प्रेमाश्रम’ लेखेँ, साथै गल्पहरू पनि लेखिरहेँ । साहित्यमा सक्रिया रहँदारहँदै मलाई पेटको गडबडीले साह्रै दुःख दिन्थ्यो । मेरो पेट बढ्न थालेको थियो, मलाई सामान्य हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो । मलाई लाग्न थाल्यो– अब धेरै दिन म बाँच्दिनँ ।
एक दिन साँझपख उर्दुबजारमा दशरथप्रसादजी द्विवेदी (सम्पादक ‘स्वेदश’) सँग मेरो भेट भयो । कहिलेकाहीँ उनीसँग साहित्य चर्चा हुन्थ्यो नै । उनले मेरो पहेँलो अनुहार देखेर भने– तपाईंको अनुहार पूरै पहेँलो भइसकेको छ, राम्ररी उपचार गराउनुस् ।
मलाई आफ्नो बिरामीबारे गरिएको कुराकानी नराम्रो लाग्थ्यो । म बिर्सन चाहन्थेँ, आफ्नो बिरामी । जब जिन्दगी नै दुई–चार महिनाको छ भने किन हाँसीखुसी नबाँच्ने ?
मैले उनलाई रिसाएर जवाफ दिएँ– मर्ने नै त हो, त्योभन्दा बढी अरु केही हुने त होइन ! म मृत्युलाई स्वागत गरेर बसेको छु ।
विचरा द्विवेदी मेरो जवाफ सुनेर लज्जित भए । मलाई पनि आफ्नो उग्रताप्रति खेद उत्पन्न भयो । यो १९२० को घटना थियो ।
देशमा असहयोग आन्दोलन बलियो भइरहेको थियो । जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड भइसकेको थियो । त्यसैताका महात्मा गान्धी गोरखपुर भ्रमणमा थिए । गाजिमिया मैदानमा अग्लो प्लेटफर्म तयार गरिएको थियो । दुई लाखभन्दा बढी मान्छे उपस्थित थिए । सहर, गाउँ सबैतिरबाट मान्छे आएका थिए । मैले जीवनमा एकैपटक यति धेरै मान्छे समारोहमा उपस्थित भएको देखेको थिइनँ । महात्मा गान्धीको दर्शन गर्न मान्छे आतुर थिए । उनको यो प्रतापले मजस्तो मरेको मान्छेको पनि चेतना बिउँझिएको थियो । त्यसको दुई–चार दिनमा मैले २० वर्षदेखि गर्दै आएको नोकरीबाट राजिनामा दिएँ ।
गाउँमा गएर केही प्रचार गर्ने चाहना भयो । एक जना मित्र (पोद्दार)को गाउँमा घर थियो । हामी त्यहीँ गएर चर्खा बनाउन थाल्यौँ । गाउँ फर्किएको केही समयपछि नै मेरो पेटको रोग कम हुन थाल्यो । त्यसपछि म पुनः काँसी फर्किएँ र आफ्नै गाउँमा बसेर चर्खा प्रचारका साथै साहित्यलेखनमा लागेर आफ्नो जीवन सार्थक पार्नतिर लागेँ । नोकरी नामको गुलामीबाट छाडेपछि नै नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि मैले भोग्दै आएको पेटको रोगबाट पनि मुक्ति मिल्यो ।
यो अनुभवले मलाई कट्टर भाग्यवादी बनाइदिएको छ । अब मेरो दृढ विश्वास के भएको छ भने, भगवान्को जे इच्छा हुन्छ त्यही हामीले भोग्नुपर्छ । मनुष्यको उद्योग पनि भगवान्को इच्छाबिना सफल हुँदैन ।
(कथासम्राट प्रेमचन्दले आफ्नो जीवनबारे लेखेको र १९३२ मा ‘हंस’ पत्रिकाको आत्मकथा अंकमा प्रकाशित भएको रचनाको सम्पादित अंश (नागरिक दैनिक)।
(अनुवादः राजेन्द्र पराजुली)
बनिसकेको कुरा पालना गर्न सहज छ, तर बिग्रेको कुरा सपार्न निकै कठिन हुन्छ (रंगभूमि)
क्रियापछिको प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम हो । (मानसरोवर– सवासेर गेहुँ)
सुख्खा रोटी चाँदीको थालमा दिए पनि त्यो खान लायक हुँदैन । (सेवासदन)
कसैका निम्ति तिमी आफ्नो जीवन नै खराब गर, तर अप्ठेरो समयमा त्यो मान्छेले काम दिँदैन । (रंगभूमि)
चोर पक्रन विरलै मान्छे तयार हुन्छन्, तर पक्राउ परिसकेको चोरलाई दुई–चार लात हान्न जोकोही तयार हुन्छ । (रंगभूमि)
सूर्य जलाउँछ पनि, उज्यालो दिन्छ पनि । (कायाकल्प)
सोझो मान्छेको मुख कुकुरले चाटिदिन्छ । (कायाकल्प)
पारस छुँदा फलाम सुन बन्छ, तर पारस फलाम कहिल्यै बन्दैन । (मानसरोवर– मन्दिर)
मासु खानु तिमीलाई राम्रो लाग्छ भने खुलेआम खाऊ । नराम्रो लाग्छ भने नखाऊ । नराम्रो पनि भन्छौ, तर लुकेर खान्छौ भने त्यो सरासर कायरता हो । यस्तो व्यवहार मलाई बिल्कुल मन पर्दैन, यो धूर्तता पनि हो ।
गोर्खाल्यान्डबारे जनचेतना बाँड्दै कलाकारहरू